जसको हत्केलामा यी तीन चिज हुन्छन्, धनी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ! – Ramailo Sandesh
जसको हत्केलामा यी तीन चिज हुन्छन्, धनी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन !
हस्तरेखा शास्त्र अनुसार हरेक मानिसको हत्केलामा जीवन रेखा, हृदय रेखा र शिर रेखा हुन्छ। यसबाहेक धेरै मानिसको हत्केलामा पैसाको रेखा पनि हुन्छ । यसका अलावा रेखाहरू जोडेर केही विशेष चिन्हहरू पनि बन्छन्। तिनीहरूले जीवनको आर्थिक स्थिति देखाउँछन्। यस्तो अवस्थामा जान्नुहोस् हत्केलाको कुन रेखा र चिन्हले धनको बारेमा बताउँछ ।
यी रेखा र चिन्हहरूले पैसाको स्थिति देखाउँछन् हस्तरेखाशास्त्रका अनुसार हत्केलाको शुक्र पर्वतले भौतिक सुख प्रदान गर्दछ। हत्केलाको सूर्य पर्वतले सम्मान र प्रसिद्धिको बारेमा बताउँछ। बृहस्पतिको आरोहणले नेतृत्व क्षमता देखाउँछ। यदि मानिसको हत्केलामा यी तीन पहाडको स्थान राम्रो छ भने उसलाई धनी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।
हस्तरेखाशास्त्रका अनुसार हत्केलाको हेडलाइन, जीवन रेखा र भाग्यरेखा मिलेर अंग्रेजीको ‘एम’ चिन्ह बन्ने हो भने व्यक्तिले ३५ देखि ५५ वर्षको अवधिमा मनग्य धन आर्जन गर्छ । साथै, यस्ता व्यक्तिहरूले विवाह पछि धेरै पैसा कमाउँछन्। यस बाहेक यस्ता व्यक्तिले जागिर–व्यवसायमा पनि धेरै प्रगति गर्छन् ।
हस्तरेखाशास्त्रका अनुसार केही व्यक्तिको हत्केलामा रहेको भाग्य रेखाले धनको स्थिति देखाउँछ। यदि ब्रेसलेटबाट सीधा रेखा निस्केर शनिको पर्वतमा पुग्यो भने अचानक धन लाभ हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले परिश्रमभन्दा भाग्य बढी पाउँछन् ।
यदि जीवन रेखा, भाग्य रेखा र हृदय रेखा वा भाग्य रेखा, हृदय रेखा र हेडलाइनको हत्केलामा त्रिभुज बनेको छ भने, व्यक्तिले धेरै स्रोतहरूबाट धन आर्जन गर्दछ।
जसको हत्केलामा भाग्यरेखा निस्केर सूर्य पर्वतमा जान्छ, उनीहरु आर्थिक मामिलामा भाग्यशाली हुन्छन् । यसका साथै यस्ता व्यक्तिले सामाजिक प्रतिष्ठा पनि पाउँछन् ।
अन्तरजातीय विवाह गर्दा गाली गरेको भन्दै बुबा-आमाको…